Tafita any amin’ireo mpihaino radio ao Taiwan ny fitantaran’ny GV momba ireo vondrompiarahamonina indizeny · Global Voices teny Malagasy
Asongadin'ny Radio Alian 96.3 ireo fitantaran'ny GV ny olan'ireo indizeny
Voadika ny 23 Novambra 2020 15:32 GMT
Mulihay sy Yanne mandray feo ny fandaharana an'onjampeo ao amin'ny Alian 96.3 studio (Sary: Joyce Lu / Nahazoana alàlana)
Tany am-piandohan'ny Septambra 2020 aho no naharay hafatra avy amin'i Mulihay Talus, mpampiantrano fahiny ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline nokarakarain'ny Rising Voices sy ireo mpiaramiasa hafa. Izy dia mpiasa ao amin'ny Alian 96.3, onjampeo mandray famatsiambolam-panjakana ary miompana manokana amin'ireo vondrompiarahamonina indizeny ao Taiwan. Nanontany ahy izy, “Inona no havalinao raha mangataka anao aho mba hiaraka amiko hanao fandaharana iray momba ireo vondrompiarahamonina indizeny manerana ny tany?” Dia novaliako hoe: “toa mahaliana!”
Taorian'ny nakàna maimaika ny hevitry ny talen'ny Rising Voices, Eddie Avila, mba hahazoana izay eritreriny, nirotsaka an-tsehatra niasa izaho sy Mulihay. Mulihay nanomana ny famintinana ho an'ilay fandaharana, izay nahazoana fankatoavana tao anatin'ny iray herinandro. Ny hevitra dia hoe, ho an'ireo andiany tsirairay, i Mulihay no hikarakara ny ampahany voalohany manasongadina vondrompiarahamonina indizeny iray eo an-toerana ary izaho hanambatra ireo fanehoankevitra rehetra avy any anaty lahatsoratra GV izay mazàna no mampiàko ireo lohahevitra ka hozaraina anatin'ny ampahany faharoa. Hatreto dia ireto no hita any anatin'ireo lahatsoratra GV sasantsasany momba ireo lohahevitra miresaka indizeny nasongadinay :
Hirao ny hira fandrotsirotsiana ho fiarovana ny teny Butchulla
Tao anatin'ny andro efatra, efa vonona ho an'ny topimaso fanindroany ny demo vitanay. Tsy izany no zavanisy taloha fa sivy andro nialohan'ny nandefasana ny andiany voalohany izahay vao nahazo ny fanamafisana hoe mety ho alefa ho an'ny mpihaino azy ilay fandaharana. Tsy noheveriko mihitsy haka betsaka amin'ny fotoanako ity fandraisana andraikitra ity ary hoe hihazakazaka toy izany ny zavatra rehetra saingy tiako be ny dingana nianarana azy. Amin'izao fotoana izao dia efa andiany fito no nalefanay, tsapako fa fotoana izao hizaràna io fiarahana miasa io amin'ireo GVers namako rehetra.
Ho an'izay liana te-hahita ilay fandaharana, dia azonao atao izany ato amin'ity pejy ity*. Arahabaina tonga soa ihany koa ianao rehefa mitsidika sy maneho fitiavana ao amin'ny pejin'ny mpankafy ilay fandaharana ao amin'ny Facebook!
* Vantany tonga ao amin'ny pejy ianao, ilainao ny (1) miditra na manao dika-petaka ny lohatenin'ilay fandaharana “Alian亮起來” eo amin'ny sehatra voalohany ary avy eo (2) manapotsitra ilay bokotra maitso antitra mba hahitàna ny valin'ny fikarohana. Aorian'izay, (3) potsirinao ny bokotra filalaovana (play) mba hihainoana ny rakitra isaky ny fizaràna tsirairay.